अपरेशन सफल, दिदीबहिनी दाजुभाइ बनेर घर फर्किए — Imandarmedia.com
काठमाडाैँ । यस कुराले मलाई यति धेरै खुसी छ, म बयान गर्न सक्दिनँ । मलाई सानैदेखि केटीको लुगा मनपर्दैन थियो । मेरो काम र बानी केटाजस्तै थियो, मेरा सात बहिनी दुई जना भाइ पाएर निकै खुसी छन् । मेरो भाइ मुराद पनि खुसी छ, इस्लामादबाट केटा बनेर गुजरात पुगेको छु
यो भनाइ पञ्जाब प्रान्तमा गुजराज जिल्लाको सोनबडी गाउँको द्वितीय वर्षका छात्र वलीद आबिदको हो । लिङ्ग परिवर्तन अघि उनको नाम बशरा आबिद थियो । उनको सानो भाइ मुराद आबिद, जो नौ कक्षाको छात्र हो, अपरेशन अघि वाफिया आबिद थियो, वलीद र मुरादका आमाबाबुको विवाह सन् १९९३ मा भएको थियो । त्यसपछि उनीहरुकोमा एकपछि अर्को ९ जना छोरीहरुको जन्म भयो, अहिले दुई जना छोरीहरुले लिङ्ग परिवर्तन गरेपछि उनका सात छोरी र दुई छोरा भएका छन् ।
त्यस्तै दुवै दिदीबहिनीको लिङ्ग परिवर्तनको अपरेशन इस्लामाबादस्थित पाकिस्तान इन्सटिट्यूट अफ मेडिकल साइन्सेजको चिल्ड्रेन अस्पतालमा डा. अमजद चौधरीको नेतृत्वमा १२ जना डाक्टरहरुको टोलीले गरेको थियो ।
एबोटाबाटस्थित अयूब टिचिङ अस्पतालका डाक्टर जुनैदका अनुसार केही बच्चाको लिङ्ग जन्मको बेला स्पष्ट हुँदैन, यसकारण बच्चाको यौनाङ्गले स्पष्ट आकार लिन पाउँदैनन् । यदी यस्ता बच्चामा दुवै लिङ्गको विशेषता भयो भने यस्तो ममिलामा जन्मने बच्चामा ‘एटिपिकल जेनेटेलिया’ नामक बिमारी हुनसक्छ, उनका अनुसार यस्ता बिमारी आमरुपमा जन्मजात हुन्छ र यस्तो स्थितिमा विशिष्ट अंग र यौन विकासको बाटोमा अवरोध हुन्छ ।
डा. चौधरीका अनुसार यो बिमारी निकै कममा देखिन्छ, लगभग ०.५ देखि ७ प्रतिशतमा, उनी भन्छन्, ‘यो केसमा दुवै केटी नै थिए । तर, उनीहरुमा केटीको कुनै विशेषता नै थिएन, उनका अनुसार निश्चित उमेर पुगेर पनि उनीहरुमा महिनावारी सुरु नै भएको थिएन । जब उनकी आमाले उनको गुजरातस्थित अस्पतालमा जाँच गराइन् तब उनीहरुलाई पीआईएमएस चिल्ड्रेन अस्पतालमा रिफर गरिएको थियो ।
शुरुवाती परीक्षणपछि उनीहरुलाई ‘एटिपिकल जनेटेलिया’ भएको पत्ता लाग्यो, उनीहरुलाई लिङ्ग परिवर्तनको अपरेशनको आवश्यकता भएको देखियो, यसका लागि उनीहरुको यौनाङ्गलाई अपरेशनको माध्यमबाट सामान्यस्थितिमा ल्याइयो ।